#Hargeysa 22 Rajab 1441 AH- Taliska guud ee Ciidanka Dab-demiska Somaliland ee Magaalada Hargeysa oo ay maanta soo gaadheen qalabka xafiisyada Ciidanka, taasoo lagu qalabayn doono Qaybo ka mida xafiisyada iyo dhismayaasha cusub ee Ciidanka Dab-demiska. -
Hargeysa- Ciidanka Dab-demiska Qaranka Somaliland oo ciidan iyo Gaadiid u ambabixiyay magaalada Laascaanood, halkaas oo ay ka bilaabi doonaan hawlgaladoodii ugu horeeyay.
#Hargeysa 22 Rajab 1441 AH- Taliska guud ee Ciidanka Dab-demiska Somaliland ee Magaalada Hargeysa oo ay maanta soo gaadheen qalabka xafiisyada Ciidanka, taasoo lagu qalabayn doono Qaybo ka mida xafiisyada iyo dhismayaasha cusub ee Ciidanka Dab-demiska.
Hambalyada Ciida Ee Taliyaha Ciidanka Dab-demiska Somaliland.
#Hargeysa – Ciidanka Dab-demiska caasimada Hargeysa oo hawlgal habeenimo ku soo samatabixiyay Nin maskaxda ka jirran oo ay la duntay Bullaacad degmada Maxamuud Haybe ee Hargeysa.
Tacsi Tiiraanyo Leh.Sheekh Maxamed Aadan Hakiye Carab oo ku Geeriyooday Magaalada Hargeysa.
Muruqmaal ku Nafwaayay Bullaacad ay ka Xoogsanayeen oo ku taalla Xaafada Qudhac-dheer ee Magaalada Hargeysa.
Saddex Nin oo Dooxa Hargeysa Ciidanka Dab-demisku ka soo samatabixiyeen habeenimadii xalay.